Tinkondlo Mariny Tsvetaevoy, okuyinto wanikezela Alexander Blok kwaba yingxenye ebalulekile kwezincwadi Russian. Lonke umjikelezo ligcwele bababuke ukulangazelela ukuthi wazizwa ngalinye libonisa.
Poems: An Ukuhlaziya "Tinkondlo ukuze Blok" Tsvetaeva
Umjikelezo izinkondlo anikezelwe Alexander Blok, ziye zaba enye yezindawo zendalo enkulu Mariny Tsvetaevoy. Akunakwenzeka ukuba aqhube ukuhlaziywa emfushane izinkondlo Tsvetaeva sika "block" - imbongi wabhala izinkondlo ngothando lwakhe, hhayi inhlamba, nangokomoya, okwamnika amandla okuphila izinsuku kanzima.
Ngo izinkondlo zakhe Tsvetaeva ubiza igama imbongi, kodwa uma kusobala ngaye imbongi wabhala. Alexander Blok Ubeyindoda imbongi omkhulu, futhi umsebenzi wakhe kuye abe intfo lebaluleke kakhulu zezinkondlo Russian.
Ukwenza ekuhlaziyweni izinkondlo Tsvetaeva sika "Tinkondlo ukuba Blok", kumelwe kushiwo ukuthi Marina iminyaka eminingi umngane ka-Alexander. ukufa Blok sika imbongi kunzima kakhulu kokudabula ngoba, njengoba u-Alexander wayethandwa wakhe.
Umlando Blok futhi Tsvetaeva
Ukwenza ukuhlaziya izinkondlo "block" Tsvetaeva, kubalulekile ukuqonda ukuthi kungani Marina wanquma ukuchitha umjikelezo lonke ka-Alexander.
Kufanele uqale ngalokho isikhathi eside kakhulu izimbongi wakhuluma. Alexander Blok kwaba omunye ambalwa owakhuluma Marina Tsvetaeva ngemva ukuthuthela kwelinye izwe kuye eMelika.
Bambalwa bayazi ukuthi imbongi Kwakuyisikhathi esinzima kakhulu - imizwa njalo, isizungu, esimweni esibucayi zokudala. Alexander asekelwe Marina ngokushesha njengoba ayengakwenza. Kamuva Tsvetaeva kwaba imbongi ngokuthi "amaphiko amabili" yakhe, hhayi ukufihla iqiniso lokuthi iyunithi baba ngempela yiwona mgogodla walo.
Uthando Marina Blok ayizange ngingowenyama, wayemthanda umphefumulo wayo, esasiseShushani olungenamkhawulo. Lapho izindaba kufika Alexander wafa, Marina lusizi ngalesi ukulahlekelwa. Futhi emva esebuyele ekhaya, wabhala umjikelezo wakhe odumile "Tinkondlo ukuze Blok". Ukuhlaziywa izinkondlo Tsvetaeva mayelana Alexander uneminyaka eziningi kwinkulumompikiswano namhlanje.
Buciko izinkondlo ukuhlaziywa Mariny Tsvetaevoy sika "Tinkondlo ukuba Blok", kubalulekile ukuphawula, kuze kufike umculo kuyinto ukuzungeza. Melody esiyitholayo ngamunye izinkondlo nesikhombisa.
Marina Tsvetaeva ubiza Block ingelosi, isithunywa sikaNkulunkulu. Ukwenza ekuhlaziyweni izinkondlo Tsvetaeva sika "Tinkondlo ukuba Blok", mangisho ukuthi imbongi Marina kubhekwe isipho sikaNkulunkulu esiya kuso sonke abantu. Marina wabhala ukuthi - abantu abaningi abasiqondi, imbongi Underrated owathanda kakhulu izwe lakubo. Tsvetaeva kuthiwe ngemva kokufa kwakhe, Bloc bayohlale besikhumbula njengoba indodana abantu isiRashiya, njengoba indodana abantu wonke.
Ngaphezu kwalokho, imbongi wabhala mayelana kokufa kuka-Alexander hhayi njengoba into esabekayo, kodwa njengoba ukuba adedelwe. Qinisekisa lo mugqa lapho imbongi wabhala ukuthi manje, ngemva kokufa Blok has konke - futhi izwe lalo elikhulu emzini wakhe, nonina, nesinkwa. Kwakuthinta ngemva kokufa kwakhe, wacabanga Marina, u-Alexander ithole konke ayewaphuphile futhi belangazelela. Kulelo zwe, njengoba yena wabhala imbongi Alexander Blok - uNkulunkulu wawo wonke.
Ukwenza i umjikelezo ukuhlaziya izinkondlo "Tinkondlo ukuze Blok" Tsvetaevoy Mariny, akunakwenzeka siphawula ukudabuka elikhona emigqeni. Naphezu kweqiniso lokuthi imbongi kubhekwa ukukhululwa kuka ukufa, emjikelezweni namanje umoya samanje yokudabuka nokulila. Lokhu kufakazelwa yezinhlamvu lapho umbhali ubuza umbuzo - iphi iwumthombo Alexander Blok?
Lokhu kusikisela ngokucacile ukuthi Tsvetaeva aphuthelwe ngempela imbongi. Wazama ukuthola izimpendulo zemibuzo yabo - ukuphi, lena yindlela azenza? Nokho, izimpendulo kwakungafanele futhi Tsvetaeva kwaba into eyodwa kuphela - ezijabulisayo imbongi.
Vele imbongi wahlushwa yokuthi u-Alexander Blok wafa wedwa. Ngisho umjikelezo umugqa ukuqinisekisa lokhu. Tsvetaeva wabhala ukuthi iyunithi - genius, kodwa akukho ekhaya, futhi akukho abangane abaseduze. Uma ufunda imigqa izinzwa ngokucacile kakhulu maqondana nothando imbongi Blok.
Ukwenza ekahle yakhe
Ukwenza ukuhlaziya izinkondlo Tsvetaeva sika "block", thole ngokuqinisekile iyingxenye ebalulekile isiko Russian, singabona ukuthi Tsvetaeva awuzange nje wayemthanda Blok. Ngisho imigqa umjikelezo wakhe, wabhala ukuthi abantu baya duty ukulondoloza inkumbulo imbongi yena - duty ukuze badumise igama lakhe.
Eqinisweni, umlobi owayebonakala imemeze izinkondlo zakhe: "Le mbongi omkhulu ingabe isaba khona; Wadedelwa, kodwa kukhona abantu kuphela ukuthi ngincome umsebenzi wakhe! Lonke abantu Russian abalahlekelwe impahla yabo! "
Ngisho negama lakhe Tsvetaeva wabhala nge uhlobo uyahlanya simthande, njengoba kufakazelwa imigqa yokuqala komjikelezo wakhe.
Kokufa kuka-Alexander Blok kuze kube sekugcineni enenxeba elivulekile enhliziyweni Mariny Tsvetaevoy. Yena wamangaza wonke umuntu: izimbongi besiliva waqonda ukulahlekelwa indlela enkulu ezinkondlweni, abantu bayazi ukuthi indoda abanamakhono enjalo ushone ekuseni ngempela, lonke izwe alikwazanga isikhathi eside ukukholelwa kokufa Bloc. Naphezu kwakho konke lokhu, akekho owakwazi ukubhala imigqa zikanokusho ka-Aleksandru kodwa Tsvetaeva. Poet wakwazi cishe deify isithombe sika-Alexander Blok.
Ikakhulu sibonga Marine Tsvetaevoy inkumbulo imbongi walondoloza namuhla. Kakade nge izingane zesikole ukwazi igama imbongi omkhulu zezinkondlo Russian esekukhanyeni lapho kwabonisa Marina Tsvetaeva - ukucabanga uyaziqhenya, izizwe inesizungu futhi abayiqondi, kodwa unekhono, ehlakaniphile futhi.
Umbhali American Lee Carroll: Biography nesithombe
"Uma ungibambezela." Abalingisi ekahle cinema emhlabeni
Indlela ushintsha ipasipoti aphelelwe yisikhathi?